Wakhe weva ngeNzondo? Ziinyawo Ezintandathu? | Martech Zone
Wakhe weva ngeNzondo? Ziinyawo Ezintandathu?
NgoMvulo, Agasti 2, 2010 NgoMgqibelo, Oktobha 25, 2014 Douglas Karr
UMichael wathumela kwibhlog yakhe ngoMeyi, xa wayetyelele Umboniso weCMS, oko Isicwangciso yenye yeendlela apho. Isicwangciso? Yintoni i Isicwangciso? Ndisandula ukufumanisa…
Isicwangciso siphakathi kwe- 2% ephezulu Zonke iiprojekthi zomthombo ovulekileyo kwihlabathi liphela, nge Abaphuhlisi abangama-200 nangaphezulu kwe-300 ababoneleli besisombululo kumazwe angama-57. Iprojekthi iye yaphuhliswa ngokubonakalayo ukususela 2001, iyafumaneka nge ngaphezu kweelwimi ezingama-40, kwaye une Eyona rekhodi yokhuseleko Nayiphi na i-CMS enkulu. Inabanini beSiseko sePlone, i-501 (c) (3) umbutho ongenzi nzuzo, kwaye iyafumaneka kuzo zonke iinkqubo ezinkulu zokusebenza.
Isicwangciso yinkqubo enamandla kakhulu yokulawula umxholo. Ngaphandle kwazo zonke iinkqubo zolawulo lomxholo, zimbalwa ezaye zavela:
Ukwahlulahlula okukhulu -Iqhelekile ukumiliselwa kwePlone ukuba ibe namakhulu amawaka okanye izigidi zamaphepha. Oku kuhle kakhulu kulawulo lweenkqubo ezininzi zolawulo lomxholo.
Ukuhamba ngendlela yesiqhelo kunye nokuvunywa - ezona ndlela zinzima zokuhamba, ukuhlela kunye nokwamkelwa zinokuphunyezwa ngokulula. Kubathengi bamashishini, oku kunamandla amakhulu.
Ukukhawuleza kunye nokulula -Iplone iyakhawuleza ngokukhawuleza ekusebenzeni kwamaphepha kwaye ujongano lulula kakhulu kwaye lunokusetyenziswa ngumsebenzisi ophakathi.
Njengoninzi lweeprojekthi zomthombo ovulekileyo, iPlone ayikho ngaphandle koluntu lwayo olungummangaliso lwabaphuhlisi kunye nokukhuphela ukongeza. Kukho phantse 4,000 izongezo iyafumaneka kwindawo yokugcina izinto kwi-intanethi ukwandisa ukusebenza kofakelo lwakho- kubandakanya ukubhloga, imephu, ukuhamba komsebenzi, usasazo lweendaba kunye nezixhobo zentlalo.
Njengoko ndibhala iiposti zebhlog, kuhlala kubonakala ngathi kukho uhlobo lonxibelelwano lwaseIndiana. Isicwangciso asihlukanga. UCalvin Hendryx-Parker ulilungu lebhodi le Isiseko seSiza Kwaye ndilapha eFortville, eIndiana. Umfazi kaCalvin, uGabrielle Hendryx-Parker waseka ifemu, iinyawo ezintandathu phezulu, ngo-1999 eSan Francisco kwaye basusa inkampani yabacebisi bamazwe aphesheya apha eIndiana. UGabrielle uphethe i-MBA yeNtengiso kunye neNkokeli evela kwi-EM Lyon, eFrance.
Ndindwendwele Iinyawo ezintandathu Phezulu kwinyanga ephelileyo kwaye wachukumiseka. Indawo yabo yeofisi ehlaziyiweyo edolophini iFortville yindawo emangazayo. Baneziko labo ledatha encinci kunye neeleta ezigcina izinto kunye nofakelo lwefayibha ukuze bahambisane nofakelo olusisiseko lwabathengi babo Amaziko eDatha oLwazi. Babonelela ngokusingathwa, ukuphuculwa kwesiko, iinkonzo zokudityaniswa, kunye nokwakha ukufakelwa kwePlone yeenkampani kubuNzululwazi boBomi, iMfundo ePhakamileyo kwaye phantse kuwo onke amanye amashishini kwihlabathi liphela.
Iinyawo eziNtandathu eziPhezulu zisandula ukutyhilwa iSolrIndex 1.0, imveliso yePlone / Zope ebonelela ngokuphuculwa kokukhangela ngokwenza amandla Isolr, iqonga lokukhangela elivela kumashishini aphuma kwiprojekthi ye-Apache Lucene. I-SolrIndex iza ngokukhawuleza ngokukhawuleza kunye nokukwazi ukukhangela. ISolrIndex iyandiswa ngokwenziwa koyilo, oko kuthetha ukuba inako ukudibanisa nezinye izalathiso kunye neekhathalogu. Ezi ziindaba ezimnandi kwiziza ezifuna ukubonelela ngokukhangela kwiindawo zokugcina ezininzi.
Iinyawo eziNtandathu eziPhezulu ngoku zinabasebenzi abangaphezu kwama-20 kwaye ziqhubekile zirekhodi lokukhula ngamanani aphindwe kabini ngonyaka-nangaphezulu konyaka ukusungulwa. Yimbeko kubungcali kunye nenkxaso ababonelela ngayo abathengi babo. Iinyawo eziNtandathu eziPhezulu zikwalawula uSuku lokuVuma ngokuCwangcisiweyo… inyanga nenyanga, imini yonke, isiganeko sokunceda abahlali basePlone.
tags: kublogaCMSInkqubo yolawulo lomxholoiinkqubo zolawulo lokuqukethwecms ezinkuluimephuImithombo yeendabaumtyaiimitha ezintandathu ukuphakamaUsebenza
Owona Mgaqo ubalulekileyo kwi-Social Media PR